Ny Nosy Gili tsara tarehy | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Toerana fitsangatsanganana, nosy
El Azia atsimo atsinanana manana zaridaina mendrika ny Paradisa ary ny sasany amin'izy ireo dia omen'ny Nosy Gili, akaikin'ny Lombok, any Indonezia. I Lombok dia nosy ihany koa, ao anatin'ny nosy Lesser Island, misaraka amin'i Bali amin'ny tery iray, noho izany dia azonao an-tsaina hoe karazana zaridaina manodidina eto.
Ny Nosy Gili dia vondrona nosy kely any atsimo andrefan'ny Lombok atsimo ary efa ela izy ireo dia lehibe toerana aleha any aoriana ary ireo olona mankafy hatsaran-tarehy anaty rano.
1 Ny Nosy Gili
2 Fizahan-tany any amin'ny Nosy Gili
Ny Nosy Gili
Ireo nosy dia niseho teo imason'ny fizahan-tany manerantany teo anelanelan'ny taona '80 sy '90 ary nanomboka teo dia niseho tamin'io karazan-tsarintany tsy misy sari-tany antsoina hoe Banana Pancake Trail, lalan'ny toeran'ireo mpizahatany vahiny, backpackers ny ankamaroany, izay mamakivaky ny faritra atsimon'i atsimo atsinanana, izay mahatonga azy ireo hifankatia. Betsaka ka maro amin'izy ireo no miafara amin'ny fametahana bar, trano fandraisam-bahiny na bara amoron-dranomasina eo amoron-dranomasina.
Androany any amin'ireo nosy dia misy serivisy bebe kokoa noho ny teo aloha, koa misy trano fisakafoanana, kafe ary fisotroana ary ny zavatra tsara indrindra dia ny rivo-piainana tena milamina misaotra an'i tsy misy moto na fiara tapaka izany amin'ny tabataban'ny natiora. Ny fifantohana dia ny ranomasina sy ny morontsiraka ka mahazo miala sasatra, mankafy ary milentika ny olona.
Ny Gili dia mafana kokoa noho i Lombok ary maina ihany koa fa amin'ny tolakandro na alina dia mety hangatsiaka. Tsy te handeha ianao eo anelanelan'ny Novambra sy aprily satria vanim-potoana orana na dia ilaina fantarina aza, kely kokoa ny orana noho ny any Bali izay manelingelina. ve ny vanim-potoanan'ny mpizahatany? Amin'ny fahavaratra, Jolay sy Aogositra, ary Desambra sy Janoary.
Nosy Gili amin'ny ankapobeny dia nosy kely telo: Gili Air, Gili Meno ary Gili Trawangan. Ity farany no lehibe indrindra ary noho izany dia be mpitsidika kokoa ary "fety" kokoa. La Gili Meno dia eo afovoan'ny hafa ary miala sasatra be izy, mety ho an'ny mpivady mitady fifandraisana akaiky kokoa; Ary farany, ny Gili Air no akaiky indrindra ny vondrona amin'i Lombock, ilay iray novolavola indrindra ary ilay iray manintona ireo mpanao kitapom-batsy indrindra.
Silamo ny mponina Ary na dia efa zatra amin'ny fomban-tsika andrefana aza izy ireo, dia zavatra tokony hotadidinao foana izany. Tsy azo atao ny miboridana na ny topless ary tsy mandeha manao akanjo fandroana any ivelan'ny morontsiraka, ohatra. Soa ihany amin'ny fotoanan'ny Ramadam dia tsy hahita fiovana lehibe ianao satria, toerana fizahan-tany ihany izany.
Ahoana no ahatongavanao amin'ireo Nosy Gili? Tsy misy seranam-piaramanidina ao Gili ka mila manidina mankany Lombok na Bali ianao ary maka sambo avy eo. Garuda, anisan'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hafa manao an'io zotra io. ny sambo avy any Bali safidy ihany koa izy ireo. Misy iray izay miainga isaky ny adiny avy any Padang Bai ka hatrany Lombok, maharitra eo anelanelan'ny adiny efatra sy enina ary mora vidy tokoa. Avy eo adiny roa hafa mankany amin'ny Gili amin'ny sambo eo an-toerana izay miala amin'ny seranan'i Bangsal.
Na dia akaiky aza i Lombok Bali no safidy tsara indrindra satria haingana kokoa ny serivisy ary maro ny mivantana. Miala amin'ny seranan'i Benoa na Serangan izy ireo, antsasak'adiny monja avy eo amin'ny faritra fizahan-tany any Bali. Ny orinasa sasany aza manana tranokala handefasana tapakila.
Ahoana ny fomba hitety ny nosy? Tsy misy fiara na moto ka misy ihany sarety na bisikilety mitaingina soavaly. Tsy dia tsara toetra ny biby ka tsara ny manofa bisikileta satria tena kely ny nosy. Mifindra eo anelanelan'ny nosy dia misy sambo, fiaraha-miasa: miasa maraina eo anelanelan'ny 8:30 sy 10 am ary ny tolakandro manomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 4:30 hariva.
Fizahan-tany any amin'ny Nosy Gili
Amin'ny ankapobeny dia ny filentehan'ny masoandro sy ny antsitrika. Betsaka ny ivon-drano antsitrika sy sekoly ho an'ny vao manomboka. Ireo nosy dia manana fiainana an-dranomasina betsaka ao anatin'izany ny sokatra misy karazany isan-karazany, trondro boloky, antsantsa haran-dranomasina ...
Ny ankamaroan'ireo ivon-drano antsitrika sy snorkeling ao Gili dia nampifandraisina hatramin'ny taona 2000 miaraka amin'ny hevitra hiarovana ny haran-dranomasina. Misy Toerana antsitrika 19 mahita haran-dranomasina, rindrina anaty rano, spaonjy, antsantsa na ahidrano.
Azonao atao ihany koa ny manao fitsangantsanganana mitaingina sambo manodidina ireo nosy telo na Lombock, fa ho an'ny maro dia tsara kokoa ny tonga tsy manao na inona na inona. Air sy Melo no tsara indrindra amin'izany, manofa bungalow manoloana ny ranomasina fotsiny. Afaka mandeha mitsangatsangana ianao, mitety ireo nosy afaka 90 minitra monja aorian'ny morontsiraka. Y raha mila fety bebe kokoa ianao dia Gili Trawangan no tanjona manana fiainana alina bebe kokoa izy io. Ny tiako holazaina dia ny bara misy mozika mivantana sy DJ's, ohatra.
Any amin'ny toerana sasany dia azonao atao ny mandoa carte de crédit nefa hampandoavana zanabola anao izy ireo ary aiza no misy ATM, mazava ho azy, ao Trawangan. Ny torohevitra omeko anao dia ny hitondranao vola. Etsy ankilany, ny tolotra fampiantranoana dia betsaka ihany koa, indrindra ho an'ireo mpanao kitapom-batsy. Gili Trawangan koa eo no ahitanao ny kalitaon'ny trano fonenana tsara indrindra, na dia ny rendrarendra, miaraka amin'ny trano manintona sy tsy miankina.
Ny mpizahatany misotro toaka dia ampitandremana manokana mba hitandrina amin'ny zava-pisotro vokarina eo an-toerana, ohatra ny toaka. Toa nametraka zavatra misy poizina tamin'izy ireo izy ireo ary niteraka olana lehibe teo amin'ireo mpizahatany sy ny mponina. Raha vehivavy ianao, indrindra aza avela irery ny zava-pisotro misy anao na aza tsara fanahy amin'ny lehilahy eo an-toerana. Nisy ny fandikan-dalàna na toe-javatra manjary mandreraka rehefa ny antsika tsy misy tsy takatra izany.
Mazava ho azy fa mivezivezy ny akora, holatra hallucinogenika ary indrindra ny rongony, fa aza adino fa faritany silamo izy ary heloka ny misotro zava-mahadomelina na mitondra zava-mahadomelina ka na dia miala sasatra amin'ny toerana voahodidin'ny vahiny ianao dia tsy ao an-trano. Ary tsy tianao ny miditra am-ponja na mahazo sahirana amin'ny polisy amin'ity faritra ity. Efa hitanao ve ny andiany Gadra any ivelany?
Farany, olana ara-pahasalamana vitsivitsy: misy moka fa tsy misy tazomoka ny nosy. Na izany na tsy izany, manala fanafody satria fotsiny ny tranga dengue sasany dia voarakitra an-tsoratra. Tokony hisotro rano amin'ny tavoahangy ianao satria ny rano mandeha eto dia masira ary raha ny momba ny herinaratra dia vokarin'ny mpamorona, mendrika ny fihenam-bidy, ka mety hisy fahatapahana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Toerana fitsangatsanganana » Nosy Gili tsara tarehy